Ndanyora pamusoro huviri booting Windows uye Ubuntu kare. Maitiro acho akavandudzika zvakanyanya mumakore mashoma apfuura. Ubuntu uye imwe Linux inotamba chaizvo zvine yakachengeteka bhuti uye UEFI izvozvi.
Saka, nei ndiri kunyora nezvekuisa Ubuntu ne Windows 10 zvakare? Nekuti mazuva ano Windows 10 Pro vhezheni inouya neBitLocker encryption uye nekudaro kana iwe uchiedza kuita mbiri bhutsu senge zvakajairwa, inogona kuramba kana kugadzira nyaya.
Ndakazviona neDell XPS yangu nyowani 13. Ndakatenga iyo yekupedzisira Dell XPS muFrance uye yakaiswa kare neUbuntu. Nehurombo, Dell India anga asina imwe sarudzo kunze kwekutenga iyo Windows 10 shanduro. Nenzira, izvo zvakanaka nekuti zvakandibatsira kunyora iyi dzidziso.
Kutaura chokwadi, mbiri kubhururuka neBitLocker encrypted disk zvakare haina kuomarara. Izvo zvinongobatanidza iyo yekuwedzera nhanho yekuremadza kunyorera usati watanga iyo mbiri bhutsu uye kuigonesa zvakare mushure mekuisa Linux.
Usazvidya moyo. Ini handisi kukusiya wakadaro nemazwi angu. Ini ndinokuratidza imwe neimwe nhanho ine akakodzera ruzivo.
Kuisa Ubuntu neBitLocker Yakanyorwa Windows 10
Ndokumbirawo kuti urambe uchifunga kuti ndakashandisa Ubuntu pano, asi nhanho dzinofanirwa kunge dzichishanda kuLinux Mint uye kumwe kugoverwa kweUbuntu zvakare.
Iyi mbiri mbiri bhuti inotungamira ndeye chete masisitimu ane Windows 10 yakaiswa neBitLocker. Sezvo chiri chinhu chitsva, nhanho ndedze chete eEFI masisitimu ane GPT chikamu chikamu. Ndokumbira utarise system yako kutanga usati watevera matanho.
Ini ndinokurudzirawo kuverenga matanho ese usati watanga kuitevera. Izvi zvinogona kukubatsira iwe kuwana marwadzo poindi uye iwe unogona kugadzirira maererano.
Hezvino zvinhu zvaunoda:
A Windows 10 system ine BitLocker encryption.
Iyo USB kiyi (inozivikanwawo sepeni yekutyaira kana USB drive) yeinenge 4 GB muhukuru uye isina data pairi.
Akaundi yeMicrosoft yekuchengetedza iyo yekudzorera kiyi yeBitLocker encryption (yekunze USB inogona kushandiswa futi asi MS account ichave iri nyore).
Inesarudzo: Kunze USB diski yekugadzira kumusoro kwedata rako.
Chiita sarudzo: Windows kupora diski.
Imwe nguva nekushivirira (zvinomanikidzwa).
Kana iwe uchida mavhidhiyo, unogona kutarisa iyi vhidhiyo yandakaita kuratidza matanho ari kuita:
Nyorera kune yedu YouTube chiteshi kune akawanda Linux mavhidhiyo
Nhanho 1: Ita backup ye data rako rakakosha pane rekunze dhisiki
Izvi zvinosarudzika asi zvinokurudzirwa. Iwe unofanirwa kugadzira backup yemafaira ako akakosha pane dhisiki rekunze nekuti urikuzobata nezvikamu zve diski.
Kana iwe usina chokwadi nezve chero chinhu, ini ndinokurudzira tarisa zvinyorwa, mimhanzi, mabhaisikopo uye zvimwe zvakakosha zvinhu zvausingafanire kurasikirwa nazvo nekuzviteedzera pane yekunze USB diski. Unogona kushandisa yekunze HDD (inononoka asi isingadhuri) kana SSD (nekukurumidza asi inodhura).
SanDisk 500GB Yakanyanya Kutakurika SSD - Kusvika ku1050MB / s - USB-C, USB 3.2 Gen 2 - Kunze Nyika Yakasimba… $89.99 Tenga pa Amazon
Toshiba Canvio Advance 1TB Inotakurika Kunze Hadhi Dhiraivha USB 3.0, Nhema - HDTCA10XK3AA $49.99 Tenga pa Amazon
Iwe unogona zvakare kushandisa peni yekutyaira yekuteedzera mafaera uye kuachengeta pane imwe komputa (kana iwe uine inopfuura imwe sisitimu).
Kana zvichibvira, tora Windows 10 kupora diski newe (sarudzo)
Iyi inosarudzika zvakare asi inogona kubatsira kana chero chinhu chikatadza. Iwe unogona kugadzirisa zvinyorwa zvebhutsu uye kudzorera Windows.
Nhanho 2: Simbisa kuti une BitLocker yakavharidzirwa disk
Chekutanga chinhu chekutanga, tarisa kana iwe uine chaizvo BitLocker encryption inogoneswa. Unozviita sei? Zviri nyore. Enda kune faira unotsvaga uye tarisa kana yako huru dhiraivha iine kuki yakaratidzwa.
Neimwe nzira, chingotsvaga BitLocker mu Windows menyu uye ona kana iwe uine marongero eBitLocker.
Nhanho 3: Dzorera kumusoro yekudzorera kiyi uye kudzima BitLocker encryption
Iye zvino zvaunoziva kuti une BitLocker encryption inogoneswa pane yako system, danho rinotevera nderekukudzima.
Usati waita izvo, iwe unofanirwa kutsigira yako yekudzorera kiyi. Iyo 40 manhamba kiyi yekumisazve BitLocker kunyorera. Sei? Nekuti iwe uri kuzochinja marongero ebhutsu uye BitLocker haifarire izvo. Ichakukumbira iwe kuti uise iyo yekudzorera kiyi kuti uve nechokwadi chekuti yako yakavharidzirwa diski iri mumaoko akachengeteka.
Iwe unogona kusevha kiyi pane yekunze USB diski kana kune yako Microsoft account. Ndakaichengeta kuaccount yangu yeMicrosoft nekuti zviri nyore kuchengetedza makiyi ekudzoreredza pane imwe nzvimbo yepakati. Eheka, unofanirwa kuona kuti unokwanisa kuwana account yeMicrosoft.
Tarisa kuti kiyi yako yekudzosa inochengetwa zvakanaka ne kuenda kune iyi link uye kupinda muakaundi yako yeMicrosoft.
Paunenge uchinge wachengeta iyo yekudzoreredza kiyi, dzima BitLocker encryption. Iyo maitiro ekunyora anogona kutora nguva zvinoenderana nekuti yakawanda sei diski nzvimbo yawakange watoshandisa kare.
Paunenge uchimirira kuti decryption ipedze, iwe unofanirwa kuenderera uye kurodha Ubuntu ISO. Kamwe BitLocker paakaremara, iwe waizoona kuti iyo yekukiya yanyangarika kubva kune yekutyaira icon.
Nhanho 4: Dhawunirodha Ubuntu ISO
Ipo diski iri kubviswa, iwe unofanirwa kushandisa iyo nguva kurodha pasi iyo ISO mufananidzo weUbuntu desktop vhezheni. Iyo faira rimwe chete rinotenderedza 2 GB muhukuru uye iwe unogona kurirodha pasi zvakananga kana kushandisa rwizi kana iwe uine inononoka uye isingaenderane internet.
Dhawunirodha Ubuntu ISO Image
Nhanho 5: Gadzira inorarama USB yeUbuntu
Paunenge uchinge wawana iyo ISO, iwe unofanirwa kuwana chishandiso che kugadzira bootable kurarama USB yeUbuntu.
Iwe unogona shandisa Etcher paLinux, Windows uye macOS. Nekudaro, nzira iyo Etcher inogadzira bhaotable disk inosiya iyo USB mune isina kujairika mamiriro uye uchave nenguva yakaoma yekumisikidza dhisiki mushure mekunge bhutsu mbiri yapera.
Neichi chikonzero, iwe uri kushandisa Windows, Ini ndinokurudzira kushandisa yemahara chishandiso senge Rufus. Dhawunirodha Rufus kubva kune yayo webhusaiti.
Chivhariso muna USB kiyi. Sezvo iyo USB ichizo fomatiwa, ita shuwa kuti haina ine chero yakakosha data.
Rufus anozviratidza otomatiki akavharirwa mumakiyi eUSB asi icharamba iri zano rakanaka kuona kuti iri kunongedzera kuiyo chaiyo USB. Ipapo iwe unofanirwa kutarisa kune iko kunowanikwa pasi peiyo ISO mufananidzo.
Iwe unofanirwa kuona kuti inoshandisa GPT partitioning scheme uye UEFI tarisiro system.
Rova bhatani rekutanga kuti utange maitiro ehupenyu hwekusika USB. Kana ukabvunzwa, sarudza 'Nyora muIO Image modhi':
Zvinotora maminetsi mashoma kupedzisa maitiro. Paunenge uchinge uine iyo mhenyu USB yakagadzirira, danho rinotevera iko iko chaiko kuiswa kweUbuntu Linux.
Nhanho 6: Bhucha kubva kurarama USB
Iine mhenyu USB yeUbuntu yakavharirwa kune yako Windows system, inguva yekudzidzira mune ino mhenyu system. Pane nzira mbiri dzekuita izvozvo:
Tangazve sisitimu uye panguva yebhoti, tinya F2 / F10 kana F12 kuti uwane zvigadziriso zvebhutsu. Kubva apa, fambisa 'kubhowa kubva munhau inobvisika' kumusoro iyo odhodhi kubva kuUSB.
Kubva mukati Windows, shandisa zvirongwa zveUFI uye sarudza kubhoja kubva munhau inobviswa. Izvi zvichagadzirisa system uye iwe unenge uchitanga kubhodhi kubva kuUSB.
Ini ndinosarudza nzira yechipiri nekuti unogona kunge uine matambudziko mukati neyakagadziriswa bhuti kubva munzira yekutanga.
Mu Windows menyu, tsvaga UEFI wobva wadzvanya pane 'Chinja sarudzo dzekutanga dzekutanga':
pasi Kutanga kutangira sarudzo, tinya pane Tangazve zvino bhatani.
Pachirongwa chinotevera, tinya pane 'Shandisa chishandiso':
Ziva iyo USB diski ine zita rayo uye saizi:
Iye zvino ichaisa simba pane yako system uye otangazve mu diski yawakasarudza iyo inofanirwa kunge iri yekurarama USB disk.
Nhanho 7: Kuisa Ubuntu ne Windows
Paunotanga kubva ku USB mhenyu, iwe unofanirwa kuona iyo GRUB skrini iyo inokupa iwe sarudzo yekuyedza Ubuntu mune inorarama USB kana kuiisa ipapo ipapo. Unogona kuenda neimwe sarudzo.
Kubheta muhupenyu Ubuntu USB
Kana iwe ukasarudza kuyedza kurarama USB, iwe unofanirwa kuona iyo yekuisa sarudzo pane desktop desktop.
Kutanga Ubuntu kuisirwa kubva kuhupenyu chikamu
Kudzvanya kunotanga maitiro ekumisikidza ayo anotanga nekusarudza mutauro uye dhizaini yekhibhodi.
Sarudza bhatani rekodhi
Pane rinotevera sikirini, rinokumbira iyo mhando yekumisikidza. Endai neyakajairika kuisirwa. Hapana chikonzero chekudhawunirodha zvinyorwa kana kuisa yechitatu-bato software izvozvi. Unogona kuzviita mushure mekumisikidza kumisikidza. Mune ruzivo rwangu, inowedzera iyo yekumisikidza nguva uye inogona kugadzira nyaya dzimwe nguva. Ini ndoda kuzvidzivirira.
Enda nekumisikidza kuisirwa
Zvinotora nguva diki uye wozoona iyo Mhando yekuisa chidzitiro. Ichi ndicho chimwe chezvikamu zvakakosha zveyese nzira yekubhuroka.
Sarudza kuisa pamwe chete Windows
Kana iwe ukaona iyo 'Isa Ubuntu padivi Windows Bhoot Manager ', inhau dzakanaka. Iwe unogona kuenderera pamwe nezvose zvekumisikidza izvo zvinoreva kudhonza iyo divider kuti igovane diski yekuparadzanisa yeUbuntu.
Asi kana iwe uri mumwe wevane rombo rakaipa vasingaone iyi sarudzo, uchafanirwa kurega kumisikidza woita zvimwe zvekuwedzera zvandakatsanangura pasi pechikamu chinowedzera.
Zvaunofanira kuita kana usingaone 'Isa Ubuntu padivi Windowssarudzo?
Hezvino izvo zvaunofanirwa kunge uchiita. Regedza kuisirwa. Simba kubva pakurarama Ubuntu chikamu, bvisa iyo mhenyu USB uye batidza iyo system zvakare.
Paunotanga kupinda Windows, enda kuDisk Management marongero. Pano, shatisa yako C Drive (kana D / E / F inotyaira chero paunenge uine yakawanda yemahara nzvimbo) uye ita imwe yemahara nzvimbo senge 50, 100 GB kana kupfuura.
Paunenge uchinge uine iyo yemahara nzvimbo, dzokorora maitiro kubva padanho 6. Zvinoreva kuti bhutsu kubva kuUSB uye tanga iyo yekuisa maitiro. Paunoona iyo Yekuisa mhando chidzitiro zvakare, enda nechimwe Chinhu Chimwe nguva ino.
Ichakutora iwe kune iyo yekuparadzanisa skrini. Pano, iwe unogona kushandisa yemahara nzvimbo yawakagadzira kare yekuisa Ubuntu.
Unogona kusarudza kugovera iyo yese yemahara nzvimbo kumidzi (swapfile uye imba ichagadzirwa otomatiki pasi pemudzi) kana iwe unogona kupatsanura midzi, kuchinjanisa uye kupatsanura kumba. Maitiro ese ari maviri akanaka.
Kamwe chikamu chacho chavepo, tora pa Isa ikozvino uye uteedzere zvimwe zvese zvekudzidzisa.
Zvinhu zvakanyatsojeka kubva pano. Iwe uchabvunzwa kusarudza nguva yenguva.
Iwe uchakumbirwa kuisa zita rekushandisa, zita remubati (zita remakomputa) uye password. Yakanaka pachena, handiti?
Zvino ingori nyaya yekumirira. Inofanira kutora 8-10 maminetsi kupedzisa kuisirwa.
Kamwe kuiswa kwacho kwapera, tangazve iyo system.
Dzorerazve mushure mekugadzirwa kwapera
Iwe unozobvunzwa kubvisa iyo USB diski. Unogona kubvisa diski panguva ino usinganetseke. Iyo system inotangazve mushure meizvi.
Bvisa USB uye pinda wopinda
Kana zvese zvikafamba zvakanaka, iwe unofanirwa kuona iyo grub skrini kana iyo system masimba pa. Pano, unogona kusarudza Ubuntu kubhoot mu Ubuntu uye Windows boot maneja kubhoot mukati Windows. Akanaka kupora, handiti?
Iwe unogona kusarudza iyo inoshanda sisitimu kubva kune grub skrini
Kana iwe usingaone sarudzo yekuisa Ubuntu padivi Windows, rega kuisirwa, bvisa iyo system uye bhuti mu Windows. Pano, gadzira imwe yemahara nzvimbo pane yako diski nekudzora rako dhisiki saizi.
Ndeipi sarudzo yako kana iwe usingaone iyo grub skrini?
Mune zvimwe zviitiko zvinosuruvarisa, iwe unogona kunge usingaone iyo grub skrini. Pane mashoma mikana pano.
Kana ikabhururuka yakananga mukati Windows, enda kuEFI masetti emabhoti uye uone kana paine sarudzo yeUbuntu pamwe ne Windows. Kana hongu, edza kuendesa Ubuntu kumusoro mubhokisi reodha.
Kana iwe ukaona grub yekununura skrini, unogona kuedza gadzirisa iyo bhutsu nyaya neabooting muhupenyu Ubuntu USB uye shandisa bhuti kugadzirisa turu.
Kana iwe usingakwanise kugadzirisa iyo grub kukanganisa uye kuwana kuvhunduka kurwisa, dzikama. Unogona kudzokera ku Windows. Pinda muEFI boot masetingi uye shandisa Windows boot maneja kubhoot mukati Windows. Pano, bvisa iyo Ubuntu chikamu kuti utore diski nzvimbo uye kubva kuEFI masetti emabhoti, bvisa iyo Ubuntu / grub boot faira.
Kana iwe usingakwanise kuboot kupinda Windows zvachose (nguva isingawanzoitika), inguva yekushandisa iyo Windows recovery disk uye backup yawakaita kare.
Paunotanga kubuntu, iwe unofanirwa kuona ichi chinogamuchirwa skrini.
Ubuntu tanga kumhanya
Iwe uri padanho rekupedzisira. Chikamu chasara chete ndechekugonesa zvakare BitLocker yako Windows kupatsanura, kana iwe uchida kunyorera zvakare. Iwe unogona kuisiya isina kunyorwa zvakare. Zviri kwauri iwe.
Nhanho 8: Gonesa Bitlocker mushure mekuisa Ubuntu zvinobudirira
Tangazve yako system uye sarudza Windows boot maneja pane grub skrini kuti utange kupinda mukati Windows, mu Windows, enda kune zvigadziriso zveBitLocker uye tinya pane 'Batidza BitLocker' sarudzo.
Hechino chakakosha chinhu. Nguva imwe neimwe paunoremadza uye zvakare kugonesa BitLocker iyo yekudzoreredza kiyi shanduko. Ichi ndicho chikonzero iwe uchizobvunzwa kutsigira yako yekudzorera kiyi zvakare. Sevha kuaccount yako zvakare.
Dzorera kumusoro kudzorera kiyi zvakare
Padanho rinotevera, rinobvunza kana iwe uchida kunyorera yose diski kana chete nzvimbo yakashandiswa. Unogona kusarudza chero sarudzo zvichienderana nezvaunoda.
Encrypt disk nzvimbo neBitLocker
Enda neiyo nyowani yekunyorera maitiro:
Tanga iko kunyorera. Ndokumbirawo urambe uchifunga kuti kunyora dhisiki kunotora imwe nguva (zvichibva pane yako yakashandiswa diski nzvimbo) uye inoshandisa yakawanda yekugadzirisa simba. Iva nemoyo murefu.
Zvinhu zvinotaridzika seyakagadzika. Ndisati ndapedza dzidziso, ini zvakare ndinokuratidza zvekuita kana Windows inokumbira kiyi yekudzosa yeBitLocker.
Bhonasi Zano: Uchishandisa BitLocker kupora (pawakakumbirwa nezvayo)
Paunogonesa BitLocker, zvinogona kuona kuti marongero ebhutsu akachinjwa. Nechikonzero ichocho, ichakumbira kiyi yekudzoreredza kana iwe ukaedza kubhodhi mukati Windows mushure mekugonesazve BitLocker.
Inotaura nezvekudzoreredza kiyi ID. Mavara ekutanga masere akakosha kuti uone kiyi yekudzoreredza kiyi.
BitLocker inokumbira kiyi yekudzosa
Pane mbozhanhare kana pane imwe komputa kana bhutsu muUbuntu uye wozowana yako Microsoft account uye tarisa pane akachengetedzwa makiyi ekudzosa.
Dzosa kiyi yekudzorera kubva kuMS account
Iwe unogona kuve neanopfuura kamwe chete kiyi yekudzorera paaccount yekuchengetedza iyo kiyi kakawanda. Apa ndipo panowanikwa yekudzorera kiyi ID. Tora chinyorwa chekiyi makumi mana kudzoreredza kiyi inosanganisirwa neiyo yekudzorera kiyi ID.
BitLocker kudzoreredza makiyi muMicrosoft account
Pinda iyi kiyi yekudzoreredza kuvhura BitLocker uye kuwana Windows.
Usazvidya moyo. Izvo hazvikubvunze iwe kiyi yekudzosera pese paunotanga kupinda Windows. Izvo zvinongova kana iwe ukaita shanduko mune bhuti marongero.
Wakave wakakwanisa kubudirira kuita mbiri bhutsu Windows 10 uine Ubuntu uye BitLocker?
Ndinoziva yaive yakaverengwa kwenguva yakareba nematanho akawandisa uye mifananidzo. Ini ndakaedza chaizvo kukupa zvese zvakafanira kuitira kuti usazonzwa kusagadzikana kana kurasikirwa chero panguva. Ndiri kushandawo pavhidhiyo yematanho aya kuti iwe ugone kuona zvinhu muchiita.
Kana iwe ukaedza iyo dzidziso, yakashanda iwe here? Iwe uchine matambudziko here kana mibvunzo? Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kubvunza muchikamu chekutaura.
Kugadzira BitLocker Dhiraivha Encryption pa Windows 10
Dual Booting Ubuntu uye Windows Ndiine SSD uye HDD
Maitiro Ekuisa Ekudzoreredza Mamiriro pane Samsung Galaxy S9
Maitiro Ekukamura USB Drives Mune Windows 10 Uchishandisa Disk Management
Nzira Yokupikira Encrypt SD Cards Achishandisa BitLocker In Windows 10
Nzira Yokugadzira Lenovo USB Recovery Drive For Windows 10